Hindiya waxay dooneysaa talo ku saabsan Dalxiiska Miyiga, Dalxiiska Caafimaadka iyo warshadaha MICE
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya waxay dooneysaa talo ku saabsan Dalxiiska Miyiga, Dalxiiska Caafimaadka iyo warshadaha MICE
Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Shirka Warka Warshadaha • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Wasaaradda Dalxiiska Hindiya waxay leedahay ujeeddada ugu weyn ee dhiirrigelinta iyo fududeynta dalxiiska gudaha iyo gudaha Hindiya.
Kordhinta kaabayaasha dalxiiska, hubinta sahlanaanta safarka, dhiirrigelinta wax soo saarka dalxiiska iyo meelaha la tagayo ayaa ka mid ah meelaha diiradda la saarayo.
Wasaaradda Dalxiisku waxay u aqoonsatay 3 meelood oo gaar ah awooddooda ballaaran - Dalxiiska Reer Miyiga, Dalxiiska Caafimaadka, iyo warshadaha MICE.
Waxay si firfircoon uga shaqeynayeen kor u qaadista iyo horumarinta aagaggan dalxiiska ku habboon.
Aqoonsiga, kala-duwanaanta, horumarinta, iyo dhiirrigelinta wax soo saarka dalxiiska ee dalka waa hindisaha Wasaaradda si looga gudbo dhinaca 'xilliyada' iyo in kor loo qaado Hindiya oo loo socdo 365 maalmood, si loo soo jiito dalxiisayaasha xiisaha gaarka ah leh, iyo in la hubiyo ku soo celi booqashooyinka alaabada gaarka ah ee Hindiya ay leedahay faa'iido isbarbardhig ah.
Dalxiiska Reer Miyiga
Wasaaradda Dalxiiska ayaa dejisay Istaraatiijiyad Qaran oo qabyo ah iyo Tubta Hormarinta Reer Miyiga Dalxiiska gudaha Hindiya - Hindise ku wajahan Atmanirbhar Bharat. Waxaa ku socda ruuxa "Vocal for Local," dalxiiska miyiga wuxuu si weyn wax ugu biirin karaa howlgalka Atmanirbhar Bharat.
Dalxiiska Caafimaadka (oo sidoo kale loo yaqaan safar caafimaad, dalxiis caafimaad ama daryeel caafimaad oo caalami ah) waa erey loo adeegsado in lagu sharxo dhaq-dhaqaaqa sii kordhaya ee safarada xuduudaha caalamiga ah si loo helo daryeelka caafimaadka. Adeegyada sida caadiga ah ay raadsadaan dadka safarka ah waxaa ka mid ah habraacyada xulashada iyo sidoo kale qalliinno takhasus gaar ah leh sida beddelka wadajirka ah (jilibka / sinta), qalliinka wadnaha, qalliinka ilkaha, iyo qalliinnada la isku qurxiyo. Si kastaba ha noqotee, ku dhowaad nooc kasta oo daryeel caafimaad ah, oo ay ku jiraan cilmu-nafsiga, daaweynta kale, iyo daryeelka isku-buuqa ayaa laga heli karaa Hindiya. Wadayaasha furaha u ah koritaanka Dalxiiska Caafimaadka iyo dalxiiska fayoobaanta ayaa inta badan awood u leh iyo helitaanka adeegyo daryeel caafimaad oo wanaagsan, fududeynta adeegyada martigelinta, waqtiga sugitaanka ugu yar, helitaanka tikniyoolajiyadaha caafimaad ee ugu dambeeyay iyo aqoonsiyo.